10 Mazhinji Scenic Gorofu Makosi MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Mazhinji Scenic Gorofu Makosi MuEurope
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Mipata yakasvibirira ine zvikomo, mafuro akakura, munzvimbo dzinoyevedza muEurope, izvi 10 makosi akajeka kwazvo egorofu muEurope, ndiwo mamwe emakirabhu epamusoro egorofu pasi rese. Yese gorofu kosi yakagadzirirwa kukwana, musanganiswa unoshamisa wezvivakwa uye runako rwepanyama.
1. Gorofu Bhuruu Green Pleneuf-Val-Andre MuBrittany
Nemaonero akajeka eiyo Chirungu Channel, iyo Bluegreen Pleneuf Val Andre kosi yegorofu inoshamisa. Kosi yegorofu yeBluegreen muBrittany ndiyo imwe yenzvimbo dzinoyevedza dzegorofu muEurope.
Iyo yakasvibira girini kosi inotarisana neBreton pamhenderekedzo, uye kusanganiswa kwevhu rakasvibira negungwa rebhuruu kunoshamisa. Pamusoro pe, iwe unenge uchitamba mune imwe ye 500 akanakisa kosi dzegorofu munyika.
2. Iyo Nyowani Scandinavia Kosi: Copenhagen
25 km kubva kuCopenhagen, iyo New Course kosi yegorofu iri mu 50 yepamusoro gorofu makosi muEurope gore rega. Iyo Nyowani Kosi 36-maburi ndeimwe yeakanyanya kunaka gorofu makosi muEurope ne 25 mahekita esango akaikomberedza.
Hova dzinotungamira kumadziva echisikigo, runyararo runonakidza marongero, uye mubairo-unohwina huni gorofu kirabhu, ichakushamisa iwe kubva pamusuwo kusvika paburi rekutanga. Iyo nharaunda yakanyatso kunaka uye yakabata vazhinji gorofu kubva kutenderera pasirese.
Hamburg kuCopenhagen Ine Chitima
Zurich kuHamburg Ine Chitima
Rotterdam kuenda Hamburg Ine Chitima
3. Castletown Gorofu Links: Vechiwi Man
Mhepo yegungwa, maruva emusango, uye epic maonero eIsle of Man, kutamba gorofu muCastletown gorofu yekubatanidza kosi chiitiko chisingakanganwiki. Isle of Man ndiyo imwe yenzvimbo dzinokatyamadza muEurope, uye iyo gorofu ndiyo imwe yenzvimbo dzinoyevedza dzegorofu muEurope.
Iwe wakakomberedzwa negungwa kubva kune vese 3 mativi, paunenge uchitamba kosi pane yakanaka Langness peninsula. Iwo matombo mahombekombe anotambanudza mahombekombe, kunyura kwezuva zvine mbiri, chinzvimbo cheCastletown Golf Links yechisere mumakosi egoridhe anoshamisa muUK neIreland. Iyo yegumi nenomwe yakatarisa iyo Gungwa reIrish, uye maonero kubva pagumi nemasere, nhoroondo yeSt. Michaels Isle, 12th-century chapel, maonero anogona kukanganisa chero goroferi ane ruzivo.
4. Tralee Gorofu Kirabhu: Ayarendi
Gara munzvimbo yepanyama, yakatarisana neAtlantic Ocean uye pamhenderekedzo, iyo Tralee kosi yegorofu muIreland ndiyo imwe yemhando dzakasarudzika uye dzinoyevedza kosi dzegorofu muEurope. Iwe unenge uchidzingirira maburi mhiri kwemakomo akasvibira nemaonero ebhuruu rakadzika pamberi pako.
Iyi yakajeka 18-hole gorofu kosi iri mu County Kerry, kumba kuDingle Peninsula, uye yakanaka Killarney national Park. Iyo gorofu kosi yakaiswa kumucheto kweiyo dzinokatyamadza pamhenderekedzo, ine green moorland uye iconic Maodzanyemba akadziva kumadokero kweIreland.
5. Gorofu Kirabhu Crans-Sur-Sierre: Siwizarendi
Imwe yevekare, zvakadaro zvemazuva ano uye zvakagadzirirwa, gorofu makosi muEurope, iyo Crans-sur-Sierre gorufu kosi muSwitzerland ndiyo imwe yenzvimbo dzinoyevedza dzegorofu muEurope. Madziva echisikigo, makomo, uye iyo yakasvibirira yakasvibira yemupata weSwitzerland zvinoshamisa uye zvinokurudzira zvinoonekwa.
Iyi inoyevedza gorofu kosi iri muSwiss Alps, saka nzvimbo inoyevedza. Nemawonero eMont Blanc neMatterhorn, makomo akakwirira uye anoyevedza muEurope, unosungirwa kushamiswa neiyi gorofu kosi. Crans-sur-Sierre gorofu kosi ndeye yakanaka chitima rwendo kure Geneva, naBern.
6. Iyo Yakanyanya Scenic Gorofu Kosi MuIreland: Yekare Musoro Gorofu Links
Kugara kumusoro kweOld Head Kinsale, yakakomberedzwa negungwa, iyo Kinsale gorofu kosi inopa maonero anoyevedza, maonero anoyevedza kwazvo muIreland yese neUK.
Nemafuro manyoro, nyika dzakakwasharara, uye maonero egungwa, iyo iconic yeIrish landscape haimire kushamisa. saka, iwe unozoshamiswa neyakashamisa mayadhi muOld Head Kinsale gorofu kosi. Iwe unenge uchitamba gorofu pane 350 miriyoni dombo dombo rejecha, kutamira kuchamhembe nekufamba kwenguva. Iyi inoshamisa kosi yegorofu iri muCork county, nechikepe, hove, scuba diving, uye zvakawanda zviitiko zvekunze kune vanofarira mvura mune ino chiteshi chakachengeteka.
7. Yakawanda Scenic Gorofu Course: Passier Gorofu Kirabhu Meran South Tyrol
Panoramic maonero emakomo anoyevedza muEurope, Passier gorofu kirabhu muMeran inopa chiitiko chisingakanganwike kune vemberi gorofu. Uyezve, neSouth Tyrol nharaunda, madziva, bunkers, nezvikomo zvakasvibirira, iyo Passier gorofu kirabhu ine inoshamisa nzvimbo uye dhizaini.
Uyezve, nzvimbo yegorofu yacho 18 maburi akatambanudzwa pamusoro pevhu, nemafuro manyoro, kukwezva gorofu kubva kuzere pasirese kwevhiki yegorofu, kana kureba kutiza kune iyo Tyrolian hunhu.
Trento kuBolzano Nechitima
Milan kuenda kuBolzano Nechitima
Bologna kuBolzano Nechitima
Venice kuBolzano Nechitima
8. Gorofu Eichenheim: Ositiriya
Pakati pesango gobvu reAlpine, makabati emapuranga akapoterera, uye mafuro, iyo Eichenheim gorufu kosi ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzegorofu muEurope. Mhepo nyowani yeAlpine, hwema hwezvisikwa, uye runako rwakafemerwa vatambi vegorofu vakanyanya pasirese. Eichenheim gorofu kosi ine 18 maburi, yakapararira pamusoro peanopfuura 6000 mamita.
Iyi inoyevedza kosi yegorofu ndeimwe yeakanakisa makirabhu egorofu muAustria, ine zvigadzirwa zvepamusoro-notch: sauna, emukati uye ekunze madziva ekuzorora mushure meakanakisa mutambo wegorofu. Iko hakuna chinhu senge alpine landscape pamwe neakanakisa mamiriro ekudzidzira kwako kuda.
9. Gardagolf Nyika Kirabhu: Itari
From Manerba-Fort of the palace of Soianoto the hills of Polpenazze and castle, the Gardagolf Club offers scenic views of olive trees and Lake Garda. Iyo Gardagolf kosi ine 27 maburi, kupararira 110 hectares, munzvimbo inoshamisa yeLombardia.
Iyi inoyevedza gorufu yakakomberedzwa nemakomo eValtenesi, kupa maonero anonakidza uye anonakidza kune avo vepamberi uye vakakomba vatambi vegorofu. Iyo red kosi ndiyo yakanyanya kunaka kosi muGardagolf, nemaruva nemiti mirefu yakatenderedza.
Trento kuLake Garda Peschiera Ine Chitima
Bolzano Bozen kuLake Garda Peschiera Ine Chitima
Bologna kuLake Garda Peschiera Ine Chitima
Venice kuGungwa Garda Peschiera Ine Chitima
10. Andermatt Gorofu Course: Siwizarendi
Rimwe dombo reSwitzerland, iyo Andermatt gorofu kosi inovhara yedu 10 mazhinji anoyevedza makosi egorofu muEurope rondedzero. Iyo Andermatt gorofu kosi iri mune yakanaka Swiss mupata. Makomo emakomo anotsvoda denga, zvikomo zvakasvibirira zvakasvibirira, uye positikadhi-senge nzvimbo.
Iyo nzvimbo inoshamisa kwazvo, kuti kunyangwe ivo vatambi vakanyanya kutariswa vanogona kutsauswa neiyo yakanaka yeUrsern mupata. Andermatt gorofu kosi yakagadzirirwa zvakanaka kuve chikamu chechisikigo uye ine hushamwari. Iwe uchaona hova dzemvura uye maruva meadows akabatanidzwa zvinoshamisa mumitambo yegorofu. Pane 18 maburi kusarudza kubva. Pamusoro pe, mhepo ine simba yemakomo inoisa chinetso kune anofarira golfer, kusimudzira mutambo wavo.
Bern kuInterlaken Nechitima
Isu tiri Save A Train uchafara kukubatsira kuronga rwendo kamwe-mu-mu-hupenyu kune izvi 10 dzakawanda dzinoyevedza makosi egorofu muEurope nechitima.
Iwe unoda kupinza yedu blog positi "1o Yakawanda Scenic Gorofu Makosi MuEurope" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-scenic-golf-courses-europe%2F%3Flang%3Dsn< - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)